KULMIYE Party » Barnaamijka
BARNAAMIJ SIYAASADEEDKA XISBIGA KULMIYE 2008
Labaatan iyo dheeraadkii sannadood ee tegey, waxaan si uun ugu soo dhex-jirey siyaasadaha Somaliland. Guddoomiyihii ugu muddada dheeraa ee Ururkii Dhaq-dhaqaaqa Waddaniga Somaliyeed (SNM) ahaan, iyo Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye ahaan, waxaan is-idhaahdaa nasiib baad leedahay ama waad ducaysan tahay. Sannadadaas, waxa nala soo gudboonaaday wey badnaayeen. Mararka qaar niyad jab wuu igu dhacayey marnaba se maan rajo-beelin. Waxa igu caawinayey inaan sii wado hawsha wuxuu ahaa keni-adayggii aad ugu hiilineyseen caddaaladda iyo go’aansigiinii inaad u halgantaan mustqbal fiican. Haddii aynu bilawnay waddada dheer ee dib-dhiska dalka iyo nidaaminta bulshada, waxaan ku kalsoonahay inaynu adeegsan doono dib-u-soo-kabashada aad muujiseen, si wada-jir ahna aynnu uga midho-dhalin doono isku-deyada inoo suurto-gelinaya inaynu gaadhno yoolalkeena fog.
Halgankii dalka lagaga xoreeyey Kelidii-Taliyahii naxariista darraa ee ina Siyaad Barre, wuxuu ahaa mid inagu jooga qiime aan la ilaabi Karin oo naf iyo maalba leh. Iyadoo burburka la taaban karo iyo qoomaha xiska inaga gaadhey ay xusuus-reeb inoo ahaan doonaan, haddana nefis baynu ka hellay guushii aynu ka guuleysaney Taliskii bahalka ahaa, taasaana ina siinaysa inaynnu laban-laabno niyad-adaygga aynu ku dhisaynno nolosheena iyo dalkeena quruxda badan. Idinkoo dareenkiina ka tarjumaya , isla markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Somaliyaba, dagaallada sokeeyena bilaabmeen, ayaa inaa karti u leedihiin inaad tashataan mar kale ku caddayseen ku-dhawaaqiddii dib-ula soo-noqoshada madax-bannaanidii Somaliland ee Burco 18kii May, 1991, ee aad ku dhisateen dawladdii ugu horraysey ee Somaliland ee uu madaxweynaha ka ahaa, Cabdiraxmaan Axmed Cali.
Si aydin u sugtaan midnimada ayaa dhidibbada ugu taagteen dawladnimadiina Shirbeeleedyadii kala dambeeyey ee Borama iyo Hargeysa iyo ansixintii dastuurka ee xigtey (oo dhalisay ku tallaabsi dimuqraadiyad dhab ah) ee lagu xaqiijiyey aftidii taariikhiiga ahayd ee dastuurka ee oggolaanshaha 97% keligiin ugu buriseen israacii 1960kii.
Waxa idiinku dhiirrri-gelinayey ridistii, qiime kasta ha ku kacdee, kelidii-taliyaha wuxuu ahaa doonistiinii iyo ku-talagalkiinii ahaa inaad soo celisaan dimuqraadiyadda, xorriyadda hadalka, iyo hab-raaca sharciga (due process of law), oo dhammaantood lagama-maarmaan u ah horumarinta nidaam xukumeed oo xaqdhawra xuquuqda aasaasiga ah. Qiime-soorradaasi (qiyamkaasi) waa qaar ku xididdaystay dhaxal-reebkeena Islaamnimo, dhaqankeena, laguna xardhay dastuurkeena. Markaa, kuwa ku gefa mabaadi’da dastuurka, waa dar ku gefey xuquuqdiina oo lumiyey kalsoonidiina. Siyaad Barre xukunka loogama ridin reerkiisa dartii, waxase xukunka looga ridey ku-gefidda uu ku gefey kalsoonidiina darteed. Taliskii Siyaad Barre wuxuu ahaa mid naxariis daran oo dhiigyo-cab ah. Si kastaba ha ahaatee, aakhirkii waad ka gacan-sarrayseen, waayo waad iska diiddeen inaad isu dhiibtaan sharaf-darro iyo xukun caddaalad daran.
Maanta, kalsoonidiinii mar kale ayaa lagu gefey, waxase hubaal ah inaad gacan-sarrayn doontaan mar kale. Indinkoo midhaheeda leh, ayaad xaslateen nabadda, si fiicanna gacan bir ah ugu ilaashateen, laakiin xukuumaddani waxay ku guul-darraysatay inay xushmayso ku-dhaqanka sharciga.
Guddoomiyihii ugu muddada dheeraa ee SNM ahaan, waxaan si toos ah ama dadbanba dul-ka-ilaalin ku soo lahaa istrateejiyado, siyaasado iyo hawl-gallo milateri, kuwaasoo keenay dib-u-dhalashada Somaliland. Guddoomiyaha Xisbiga Kulmiye ahaanna, waxaan ku oggolaaday doorashadii Madaxtooyada kala-horrayn aan sugnayn oo 82 cod ah lexejeclo dalka iyo dadka aan u qabo darteed. Kamay dhicin weli taariikhda Afrikada Saxaaraha ka hoosaysa in doorasho sidaa la isugu dhawyahay ay ku dhammaatoo nabadgelyo iyadoon lagu kala-bixin lana adeegsan gacan-ka-hadal, waxayse beesha caalamku qorteen kuna ammaaneen Xisbiga Kulmiye siiba bislaanshahiisa siyaasadeed.
Xisbiga Kulmiye wuxuu u taagan yahay nabad, midnimo iyo horumar dhinac walba leh, Guddoomiye ahaanna, waxaan halkan idiinku soo gudbinayaa siyaasadahiisa, barnaamijyadiisa iyo qorshayaashiisa uu dalka ku hoggaamin doono. Taageeradiina darteed, waxaanu ku kalsoon nahay inaynnu gacan-sarrayn doonno.
Bayaankani wuxuu u taagan yahay kii koowaad ee tafatiran ee Xisbiga Kulmiye, waxaannuna rumaysannahay inuu si ballaadhan u daboolayo himilooyinka muhiimka ah ee dadka Somaliland. Bayaankani ma aha mid aan wax laga beddeli karin, waayo waxaan hubaa in fikrado iyo aragtiyo cusubi ku soo bixi doonaan wada-tashigeenna iyo wadajir u-tiigsiga yoolalkeenna.
Anigoo ka wakiil ah Xisbiga Kulmiye, waxaan idiin xaqiijinayaa inaannu mar kasta danta guud idiinku ahaan doonno adeegayaal aan is-weyneyn lahayn, oo aanay marnaba naga lumeynin miqyaaska damiirkayagu oo aanaan ku doodi doonin inaanu nahay saadadiina. Ii oggolaada inaan daqiiqaddan u adeegsado is-xusuusinta geesiyaasheenii shahiiday, Allah ha u naxariistee, oo aan idhaahdo tacabkiinnii baannu maalaynnaa idinka dartiin.
Waxaan rajaynayaa in aad tamaraysateen, yididiilana yeelateen, waad mahadsan tihiin.
AXMED MAXAMED SIILAANYO.
Bisha, Abriil 2008da oo ah waqtiga loo qabtay inay dhacdo doorashada madaxtooyadu lana filayo in xukuumad cusubi xilka la wareegto ayaad mooddaa inay dhaabado taariikheed shinkoodu buuxsmay. Waxana dhaabadahaas taariikheed ka mid ah:
20 sano ayaa ka soo wareegaya kolkii urrurka SNM xididdda u siibay nidaamkii keli-talsika ahaa ee Siyaad Barre, 17 sano ayaa laga joogayaa dharaartii ay golaha odayaasha iyo wax garadka beelaha reer Somaliland ay Burco kaga dhawaaqeen ka noqoshada midnimadii lala galay Somaliya iyo gooni-isu-taagga Somaliland, iyo ugu danbayn, ahna tan ugu daran, 11 sano ayaa ka soo wareegaysa markii Riyaale xukunka yimid, isagoo Madaxweyne ku xigeen kadibna Madaxweyne ah. 11 sano kadib, xaaladda nololeed ee dalku waa ay ka sii daraysay, dhab ahaantiina waxa lagu sugan yahay xaalad ku suntan qalalaase.
Hogaaminta madaxweyne Riyaale ama hoggaamin la’aantiisaba, dalk a waxa isu barkaday dhibaatooyin dhaqaale, siyaasadeed iyo bulsho.
Dadweynuhu waxay u bukaan isbeddel xukuumadeed, kuwo badan oo dadkaas ka mid ahina waxay rajadooda ku xidhayaan doorashada madaxtooyada ee 2008 ee foolka inagu soo haysa.
Waxa la joogaa xilligii gaashaanka loo daruuri lahaa maamulkan horumarka fadhiidka ka ah lana dooran lahaa maamul u qalma oo istaahila inuu dalka hoggaamiyo.
Xisbiga Kulmiye mugdi kagama jiro baaxadda qalalaasaha uu maamulakani dalka u horseeday, taas ayaana ku qasbaysa in Kulmiye dedaalkiisa laban-laabo si uu dadka u baraarujiyo una dareensiiyo dhibaatooyinka soo fool leh, haseyeshee waxa uu wax walba ka fuudhyeelayaa soo bandhigidda iyo qeexidda barnaamij siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho oo tifaftiran, kaas oo ay hagayso aragti iyo ujeeddoyin looga gol- leeyahay in lagu higsado nabad waarta, barwaaqo, dimuqraadiyad iyo istraatijaddii xubin lagaga noqon lahaa Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa.
Xisbiga Kulmiye wuxuu u hawl-gelayaa xaqiijinta iyo taabbo-gelinta madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland iyo ka mid-noqoshadeeda ururrada caalamiga ah iyadoo ah dawlad la aqoonsan yahay.
Xisbiga Kulmiye wuxu higsanayaa inuu dalkan Somaliland ka dhiso bulsho casri ahoo ka xor ah faqriga, jahliga, dulmiga, keli-talisnimda iyo guud ahaan maamul xumada weji kasta oo ay leedahay;
Xisbiga Kulmiye wuxu ku naalloonayaa yagleelidda bulsho dimuqraadi ah oo ay saldhig u yihiin mabaadi’da talo-wadaagga ee ka soo jeeda dhaqankeenna suubban,diinteenna Isla a mka ah iyo waayo-aragnimada ina anfacaysa ee aynnu ka soo dheegannay horumarka sayniska iyo teknoolajiyada bulshada caalamku ku tallaabsatay;
Xisbiga Kulmiye wuxu ku hammiyayaa abuuridda bulsho nabdoon oo u hiilisa sinnaanta, is-xaqdhawrka iyo nabad-ku-wada-noolaanshaha ummadda Somaliland gaar ahaan iyo dadyawga gobolka iyo adduun-weynaha guud ahaan;
Xisbiga Kulmiye wuxuu tiigsanayaa xaqiijinta bulsho ka dhiidhida addoonsiga weji kasta oo uu leeyahay iyo nooc kasta oo gumaysi ah, kana dheeraata yasidda, kala-faquuqidda iyo is-qabyaaladaynta;
adeegsiga gole xukuumadeed oo kooban, tayana leh iyadoo xeer jideyn doono jiritaanka wasaarad ama hay’ad kasta oo xukuumadeed, xeerkaasoo caddayn doona xilkeeda, qaab-dhismeedkeeda iyo xidhiidhka ay la leedahay hay’adaha kale ee dawladda;
hirgelinta hannaanka dimuqraadiga ah si waafaqsan diinta Islaamka iyo dhaqankeena suubban ee Soomaaliyeed iyadoo laga faa’iidaysanayo waayo araganimada waxtarka leh ee dadyawga addu u nka ee arrintaas ka midho dhaliyey;
madaxbann a a n ynta iyo horumarinta warbaahinta dawladda, iyadoo la hoos geyn doono komishan madax-bannaan oo dejiya siyaasadda guud ee lagu dhaqayo warbaahinta kuna ilaaliya;
abuuridda xafiiska madaxa bannaan ee xadgudub-eegaha (ombudsman) oo awood u leh qabashada cabashooyinka la xidhiidha ku-xadgudubka xuquuqda aasaasiga ah ee qofka, baadhistooda iyo tallaabo-ka-qaadistooda si waafaqsan xeerka;
dhawridda xuquuqaha aasaasiga iyo xorriyadaha lagama maarmaanka ah ee habar dad;
abuuridda xafiiska Garyaqaanka Guud ee dawladda;
dib-u-habaynta iyo horumarinta xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud, boliiska iyo Ciidanka Asluubta iyo ka-ilaalintooda ku-takrifalka awoodda (power abuse);
Waxa xisbiga Kulmiye mudnaanta siinayaa siday Somaliland saaxiibo ugu yeelan lahayd Afrika iyo daafaha kale ee adduunka, sababtoo ah, waxan qiraynaa in masuuliyadda hore loogu riixayo madaxbanaanida dadkeenan u harraadan dimuqraadiyada iyo ka mid noqoshadooda beelsha caalamku ay si aad ah ugu xidhan tahay had a ba sida loo maamulo siyaasdda debedda.
Waxa xisbiga Kulmiye ku dedaalayaa sidii Somaliland go’doonka looga saari lahaa ayna uga mid noqon lahayd beelsha caalmka. taasi waa ujeeddo muhim ah oo khusaysa siyaasdda debedda waana mid si toos ah uga tarjumaysa boholyawga dadkeenu u hayo dimuqraadiyadda, horumarka iyo aayo-ka-tashiga.
In barwaaqaynta dhaqaale ee Somaliland ku xidhan yahay iskaashi dhaqaale ee heer gobol iyo heer caalami iyo suuqa xorta ah
Inay siyaasaddeena debedda ka muuqato siday inooga go’an tahay inaan dhisno Somaliland dimuqraadi ah
Inaan isku hawllo in xuquuqaha xuquuqaha habar-dad aanay ku koobnaanin siyaasadda, ee ay gaadhaan dhinacayda dhaqaalaha, bulshada iyo deegaanka.
maamulidda xidhiidhada caalamiga ah ee Somaliland waa inay ahaadaan kuwo xalliiban (transparent) waxayna dhacayaan iyadoo lagala tashanayo baarlamaanka
danaha qaranka Somaliland ayaa mar walba hagaya siyaasaddeena Debedda.
ammaanka iyo tayada nolosha dadka Somaliland, sharciga iyo kala danbaynta, nabadda iyo xasiloonida dhaqaale, iyo iskaashiga goboleed ayaa noqonaya mabaadii”da aasaasiga ah ee ay ku dhismayso siyaasadda arrimaha debedda ee Somaliland marka kulmiye qabto majaraha dalka
DHIBAATOOYINKA UGU MUHIMSAN EE SIYAASADDA DEBEDDA EE HAYSTA SOMALILAND Arrinta ictiraafka caalamiga ah ee dawladaha xorta ah laga quud darraynayo.
Xidhiidhka lala yeelanayo Somaliya, kaas oo inta badan ahaa mid ay ku ladhan yihiin turunturooyin, colaad iyo lama filaannaba.
Walaac dhinaca ammaanka ah oo ka dhalshay iska-hor imaadyada riiqda dheeraaday ee ka socda Soomaaliya,
Baadi-goobka xal-u-helidda dhibaatooyinka gudaha ee ka aloosan meelo ka mid ah gobolada Bariga ee Somalailand
Xisbiga kulmiye wuxuu u arkaa in caddaladdu tahay aasaaska nabadda, barwaaqada, midnimada iyo horumarka ummadda. Sidaa darteed, wuxuu ku tallaabsan doonaa sidii caddaaladdu u noqon lahayd mid ummadda wada deeqda.
(b) GARSOORKA: Xisbiga Kulmiye wuxuu aaminsan yahay in garsoorku yahay halkii sixi lahayd caddaalad darro kasta oo dhacda ama cidi tirsato. Si garsoorku u gudan karo mas’uliyaddaa ahmiyadda weyn leh, waa inuu yahay loona arko inuu yahay mid dhex u ah dhinacyada uu u garnaqayo isla markaana haysta imkaaniyaadka kale ee lagama maarmaanka u ah.
Xisbiga Kulmiye wuxuu u arkaa in garsoorku noqon karo mid dhex u ah dhinacyada uu u gar-naqayo keliya marka uu ka madax-bannaan yahay dhinacyadaa. Sidaa darteed, Xisbigu wuxuu xaqiijin doonaa in garsoorku helo mada